[Isithombe-Xi] [Igumbi elilodwa nehholo] Umugqa 5/14 Umzila ongaphansi komhlaba wasePuhuangyu esitezi esiphezulu-Temple of Heaven Tiananmen-West Railway Station South Station Airport direct-Xiehe Hospital-Tumor Hospital - I-Airbnb
[Isithombe-Xi] [Igumbi elilodwa nehholo] Umugqa 5/14 Umzila ongaphansi komhlaba wasePuhuangyu esitezi esiphezulu-Temple of Heaven Tiananmen-West Railway Station South Station Airport direct-Xiehe Hospital-Tumor Hospital
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-绘家民宿
U-绘家民宿 Ungumbungazi ovelele
Sawubona... Ukhona? Uma igumbi ligcwele, sicela uhlole ezinye izinhlu zami
1. [Isingeniso sesakhiwo] Leli khasi liqasha ifulethi elizimele elingamamitha-skwele angu-48, elikwazi ukuhlalisa abantu ababili noma abathathu. Uma kunezivakashi eziningi, ungachofoza esithombeni sosokhaya ukuze ubhukhe izindlu ezengeziwe.
2. [I-Second Ring Road/Metro Exit/Elevator Independent Apartment] Leli fulethi linombhede ophindwe kabili ojwayelekile ongu-1.5*2 wamamitha kanye nombhede owodwa ogoqwayo oyimitha elingu-1*2 wamamitha, ongahlinzeka ngezinsizakalo zabantu abadala abangafika kwabangu-3.
3. [Indawo] Phuma ku-B no-E Wolayini We-Metro 14/5 (sicela uye esangweni lasentshonalanga lomphakathi kusukela ku-Exit E ukuze ungene efulethini ukuze uthole imithwalo emikhulu), bese uphuma e-Puhuangyu Station, Phuma F of Metro Line 14. Ezokuthutha ezilula, isigamu sehora ukusuka endlini ukuya kunoma iyiphi indawo ebukekayo ngaphakathi komgwaqo wesibili oyindilinga.
4. [Ezokuthutha] imizuzu eyi-15 ukusuka eBeijing South Railway Station ukuya endaweni yokuhlala; I-Daxing Airport/Capital Airport, ibhasi lesikhumulo sezindiza lifika ngqo ebhilidini.
5. [Izindawo ezizungezile] Phansi kunesitolo esikhulu se-Wumart, umshini webhange nomshini we-ATM, indawo yokudlela yase-KFC yamahora angu-24, i-Haidilao, ukupheka okuyisitshulu kohlaka lwesicabha, i-Bao master nokunye ukudla okulula okunhlobonhlobo, i-takeway nayo ingalethwa efulethini. Kukhona indawo yokupaka ama-yuan angu-2 ngehora.
6. [Intofontofo futhi ithule] Ifulethi lisendaweni ephezulu yomphakathi, lithule futhi linethezekile.
7. [Ukuphepha] Ukuphepha kwamahora angu-24, okhiye beminyango kagesi abahlakaniphile. Ngenxa yokuphathwa kwezokuphepha okuqinile e-Beijing, izingidi zezicabha zidinga ukubhaliswa kwesitifiketi somuntu ongaphakathi, sicela uqinisekise ukuthi usebenzisana naye.
PS: IsiNgisi sethu asisihle (>_<)
Ngaphansi kunesitolo esikhulu se-Wumart, umshini webhange kanye ne-ATM, indawo yokudlela ye-KFC yamahora angu-24, i-Haidilao, uhlaka lomnyango ofakwe emanzini, i-Bao Shifu nokunye ukudla okulula okuhlukahlukene, okuthathayo nakho kungalethwa efulethini. Kukhona indawo yokupaka ama-yuan angu-2 ngehora.
Ngizimisele ukunikeza abaqashi indawo yonke yangasese, lapho bengidinga, ngizoba lapho ngokushesha okukhulu
U绘家民宿 Ungumbungazi ovelele